झनै महंगियो नेपालीको भान्सा, कुन खाद्यवस्तुको मूल्य कति बढ्यो ? - Arthatantra.com
झनै महंगियो नेपालीको भान्सा, कुन खाद्यवस्तुको मूल्य कति बढ्यो ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नौ महिना अर्थात चैत महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.१० प्रतिशत रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्याङ्कनले यस्तो देखाएको हो ।
उक्त अवधिमा समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.४० प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ७.१८ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिको औसत मुद्रास्फीति ५.६२ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आवको नौ महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ६.२५ प्रतिशत, तराईमा ७.६१ प्रतिशत, पहाडमा ७.७९ प्रतिशत र हिमालमा ८.२५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ ।
वि.सं.२०७९ वैशाख २८ बुधवार १७:०० मा प्रकाशित
अघिल्लाे विप्रेषण आप्रवाहमा झिनो गिरावट, चालु आवको नौ महिनामा ७२४ अर्ब ७४ करोड कायम
पछिल्लाे जेठ महिनामा पनि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर नबढाउने